အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - Zhuji Feihu ချည်မျှင်စက် Co. ,, Ltd မှ
သင်ဒီမှာပါ : နေအိမ် >သတင်းအချက်အလက် >သတင်း >ကုမ္ပဏီသတင်းများ
အချိန်: 2019-02-13 hits:
Q1: ဘယ်မှာလဲ သင့်ရဲ့စက်ရုံတည်ရှိ? မည်သို့ဈရှိရနိုင်?
လိပ်စာ No.159 Sandu လမ်းဖြစ်ပါသည်, Taozhu လမ်း, Zhuji မြို့, Zhejiang ပြည်နယ်, တရုတ်။
သငျသညျရှန်ဟိုင်းသို့မဟုတ် Hangzhou မှပျံသန်းနိုင်သည်,ထိုအခါ ငါတို့သည်သင်တို့ကောက်လို့ရပါတယ်.
Q2: ငါမှအခမဲ့နမူနာရနိုင်ခြင်းရှိမရှိ အရည်အသွေးစစ်ဆေး?
တစ်ဦးက: ဒါပေါ့, ငါတို့သည်သင်တို့နမူနာပေးပို့နိုင်ပြီး အခမဲ့အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်အဘို့အအရောင်ဇယား , ဒါပေမယ့် express ကိုအခကြေးငွေအားဖြင့်ပေးဆောင်ဖြစ်ပါတယ် သငျသညျ.
တစ်ဦးက: ကျွန်တော်တို့ T / T လက်ခံနိုင်ပါသည်, L ကို A / C, အနောက်တိုင်း ပြည်ထောင်စု, အကြွေးဝယ်ကဒ်, MoneyGram,ငွေစသည်တို့ကို. ယေဘုယျအားဖြင့် ပြောရမယ်ဆိုရင်, 30% T / T ကြိုတင်မဲအတွက်သိုက်, 70% ၏မိတ္တူကိုဆန့်ကျင်ချိန်ခွင်လျှာ မျက်မှောက်မှာ, L / C ကို.
တစ်ဦးက: ကျနော်တို့အညီသင်လျှော့စျေးပူဇော်နိုင်ပါတယ် သင့်ရဲ့အမိန့်အရည်အတွက်. အမိန့်အရည်အတွက် သာ., အဆိုပါအထူးလျှော့စျေးကတော့ပိုကြီး.
Q5: သငျသညျ OEM ဝန်ဆောင်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်
တစ်ဦးက:ဟုတ်ကဲ့, OEM လက်ခံနိုင်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည်.
Q6: ဘယ်လောက်ကြာထုတ်လုပ်မှုများအတွက် ?
တစ်ဦးက: အများအားဖြင့်, ပတ်လည် \_ 's 15 သို့ 25 ရက်ပေါင်း, အမိန့်အရေအတွက်ပေါ်မူတည်သည့်.
တစ်ဦးက:. အလျောက်ယင်းတို့၏ပို့ကုန်အထပ်သားအမှုပေါင်း ထုပ်ပိုးသို့မဟုတ် သင့်ရဲ့အဆိုအရ တောင်းဆိုချက်ကို.
Q8: နိုင် ကျွန်တော်စက်ကိုစိတ်ကြိုက်များအတွက်နမူနာပေးပို့?
တစ်ဦးက: အဘယ်သူမျှမ ပြဿနာ, သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုသင်လိုချင် bobbin ပေးပို့နိုင်ပါတယ်, နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာလိမ့်မည် အကြံပြုနှင့်စိတ်ကြိုက်စက်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းနှင့်အညီများနှင့်အခြား တောင်းဆိုချက်.
Q9: နိုင် ကျနော်တို့ကိုပိုပြီးအသေးစိတ်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်များ၏အရည်အသွေးစစ်ဆေးနေသည်သင်၏စက်ရုံကိုသွား စက်ယန္တရား?
တစ်ဦးက: ဟုတ်ကဲ့, ပြဿနာမရှိပါဘူး, ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ရုံမှကြိုဆိုပါတယ်နှင့်ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီအတတျနိုငျဆုံးပါလိမ့်မယ်.
Q10: နိုင် ကျနော်တို့ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုမီစက်စစ်ဆေးခြင်း?
တစ်ဦးက: ဟုတ်ကဲ့, သင်ပေးပို့လာနှင့်စစ်ဆေးခြင်းနိုင်ပါတယ်. သငျသညျမလာနိုင်လျှင်, ငါတို့မှာရှိတယ် စက်စမ်းသပ်ရန်နှင့်ပေးပို့စစ်ဆေးခြင်းမှအထူးပြုအင်ဂျင်နီယာအသင်း. ကျွန်တော်တို့ သင်တစ်ဦးလုံးဝကောင်းသောစက်ကိုလက်ခံရရှိနိုင်သောအာမခံချက်.
Q11: အကယ်. ကျွန်တော်စက်သို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်မှုအပေါ်ပြဿနာရှိ, သငျသညျကြှနျုပျတို့ကိုကူညီပေးနိုငျ?
တစ်ဦးက: ဟုတ်ကဲ့, ပြဿနာမရှိပါဘူး.
ကျနော်တို့တားဆီးကို Maintenance ပူဇော်နှင့်အရောင်းဝန်ဆောင်မှုပြီးနောက်. ကျနော်တို့ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုမီစက်စမ်းသပ်ရန်. ကျနော်တို့ပစ္စည်းကိရိယာများကိစ္စများကာကွယ်တားဆီးဖို့ပြည့်စုံပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုရွေးချယ်စရာပူဇော်
လွန်ခဲ့သော : Feihu CNC ချည်အကွေ့အကောက်များသောစက်ယခုနှစ်ရေပန်းစားသည်
နောက်တစ်ခု : ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအထည်အလိပ်စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ